Jika-Isitshixo soMboneleli weSisombululo sokuDlala
Njengomvelisi ophambili wasendlwini wokudlala ngaphakathi, iFunlandia ibonelela ngezitshixo zokudlala ngaphakathi kwezisombululo zabathengi behlabathi. Sigubungela yonke inkqubo ukusuka kuyilo oluneenkcukacha ukuya kwimveliso kunye nofakelo, ngokubonelela ngomgangatho ophezulu kunye neendawo zokudlala zangaphakathi ezifikelelekayo.
Iqela lethu lokuyila lelizwe liphela lizama ukwenza izisombululo zemidlalo ngaphakathi ngaphakathi kuyilo loyilo oludibanisa indawo yomthengi. Uyilo lujolise ekudaleni amava omdlalo omtsha "wokudibanisa" owoyisa umda wendawo kunye noyilo lwezixhobo zethu zokudlala eziguqukayo.
Iqela lethu loyilo lijolise ekwandiseni ukuthengisa kunye nokuphucula amava abathengi. Sihlengahlengise ukudlala kwangaphakathi kosapho kunye neeprojekthi ezinemixholo yezithuba ezisusela kwi-100㎡ ukuya kwi-10000㎡. Umsebenzi wethu obanzi we-R & D kunye nokwenziwa kwezinto kuqinisekisa ukumiliselwa okujolise nempumelelo kweeprojekthi zethu.
Sidibana nemigangatho engqongqo yezokhuseleko kushishino: umgangatho we-ASTM wase-USA kunye nomgangatho we-EN waseYurophu. Le migangatho isebenza njengezikhokelo kuyilo kunye neeprotocol zokwenza. Sisebenzisa izinto ezikumgangatho ophezulu kwaye siqesha itekhnoloji yakutshanje ukuqinisekisa umgangatho ophezulu wezixhobo zethu zokudlala. Imigca yethu yeemveliso, ezona zibanzi kolu shishino, zihlaziywa rhoqo ukuze abathengi babe nezona mveliso zintsha zomzuzu ezandleni zabo.
Okwangoku, iFunlandia inamaqabane kumazwekazi amathandathu nangaphezulu kwabasebenzi abangama-260 kwimveliso nakwinkonzo yeqela labo. Ngaphezulu kweeprojekthi ezili-1000 zamazwe ngamazwe nezasekhaya zokuhlanganisa ukonwabisa zigqitywe ngempumelelo, kusonwabisa iintsapho ezizizigidi ezingama-20 ezonwabileyo kwihlabathi liphela.
Ukwenza umdlalo onentsingiselo kwiintsapho
Saqala umsebenzi we-OEM weemveliso ezidumileyo zamanye amazwe
Iqonga le-OEM labathengi bamanye amazwe: Ngokusebenzisa imveliso ye-OEM kulonwabo oluninzi lwamazwe aphesheya kunye neempawu zokudlala, siye sakwazi imigangatho yokhuseleko lwamanye amazwe yoyilo lwezixhobo zokudlala ngaphakathi kunye nenkqubo yokuvelisa umgangatho kwinqanaba lokuqala.
IFunlandia ibhaliswe ngokusemthethweni kwaye yaqala ngokwazisa uhlobo lwayo lwezixhobo zokudlala ngaphakathi kwintengiso yamanye amazwe.
IKomkhulu laseFunlandia lasekwa
Iziko lethu lemveliso laseShanghai lisekiwe. Iyaziwa ngokhuseleko kunye nemigangatho yomgangatho ehlangabezana kwaye idlule eyaseMntla Melika naseYurophu, efumene ukwamkelwa ngokupheleleyo ngabathengi base China nakwamanye amazwe.
IFunlandia yaba nguMboneleli oGqwesileyo wokuDlala isisombululo kuMdlalo kwiNtengiso yeHlabathi
I-brand yethu iyaziwa ngokubanzi kwimarike yamazwe aphesheya kwaye iye yaba yenye yezona zinto zifunwa kakhulu emva kwe China.
IFunlandia ikhokelele kwindlela entsha yokudlalela ngaphakathi kwishishini laseTshayina kunye nomzi mveliso wokuzonwabisa
IFunlandia ithathe inxaxheba kwimiboniso emininzi yamanye amazwe kwaye yazisa ngezixhobo zokuzonwabisa eziphambili "ISKYMAZE" (i-3D maze eguqukayo) kunye ne "DROP -SLIDE" eChina.
IZiko leMveliso noPhuhliso laseSuzhou laseFunlandia lisekiwe
Iziko lethu lokuvelisa iSuzhou lasekwa labasebenzi abangama-260 bebonke kunye nomzi-mveliso omkhulu ngokwaneleyo ukuba ubambe i-15,000 yeemitha zesikwere.
Uphawu lwePlani yePlanethi yokuSebenza yeFunlandia yasekwa ukukunceda uthathe umhlaba
I- "Action Planet" yethu ikhokelela kwinto entsha ethi "Ukudlala umdlalo wezemidlalo," kwaye iyafumana ingqwalaselo enkulu! Abantu bayalithanda iZiko laseMelika lokuzonwabisa ngoSapho.
IFunlandia iQalile ukuBambisana ngobuChule ngokuKhokela iiBrand zamanye amazwe
Sisekele intsebenziswano ebanzi kunye ne-FEC enkulu yase-China kunye neyamazwe aphesheya kunye neendawo zokudlala zangaphakathi ukuze zibonwe njengenjini entsha yendawo yokudlala engaphakathi kunye nommeli wezixhobo ezikumgangatho ophezulu kwimakethi yehlabathi.
Uyilo lweThunderFox lwasekwa
IFunlandia iyinkampani ephethwe yoyilo ngokupheleleyo "iThunderFox" isungulwe yabonelela abathengi ngemveliso kunye nezisombululo zenkonzo ukusuka kwimbono ukuya ekuphunyezweni.
IFunlandia ivula umda omtsha kumdlalo wezemidlalo
Sithathe "ukonwaba kwezemidlalo kwizinga elikhulu" kwaye sikubeka ezandleni zabaxumi bethu, ngeeprojekthi ezintle ezingaphumelelanga ukuqinisekiswa kweTÜV kuphela kodwa zisincedisile nasekwenzeni ubuhlakani. Ngoku silungele nawuphi na umqobo ophoswayo kuthi!
UMGANGATHO WOKHUSELEKO -
-AMAQELA ETHU -
Ilungelo lokushicilela 2010-2021 funlandia.com Onke amalungelo agciniwe. Imveliso eshushuImephu yendawoIindleko zokudlala ngaphakathi kwiNdawo yokuDlala, IBig Air Trampoline Park Franchise, Abaenzi Bendawo Yokudlala, Dlala izixhobo zabantwana abasabhadazayo, Ukwenziwa kweTrampoline Park, Indawo yokudlala ngaphakathi yezixhobo zokudlala,